चाडपर्वमा कसरी सुरक्षित हुने? प्रहरीका १८ टिप्स( शेयर गर्नुहोस) | Suchana Daily
असोज २४, २०७५|
काठमाडौं– देशभरकै प्रहरी कार्यालयले दसैं, तिहार र छठ पर्वलक्षित गरी विशेष योजना लागू गरिसकेका छन्। विशेष सुरक्षा योजना अन्तर्गत ठूलो मात्रामा सादा पोशाक र बर्दीका प्रहरी खटिने प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्रीका अनुसार दसैंलाई सुरक्षित बनाउन देशभर ३१ हजार ३ सय ७९ जना प्रहरी खटिएका छन्। त्यसैगरी, २ हजार ७ सय १६ जना ट्राफिक खटिएका छन् भने १ सय ५४ स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ।
चाडपर्वलाई अपराधीले अवसरका रुपमा लिने गरेकाले अपराध नहोस् भन्दै प्रहरीले निगरानी सुरु गरेको छ। प्रहरीको एकल प्रयास मात्रै अपराध नियन्त्रण गर्न सम्भव नहुने भन्दै प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्रीले आम नारिकलाई सहयोग गर्न अपिल गरेका छन्। चाडपर्वमा हुने अपराध रोक्न तथा न्यूनीकरण गर्न प्रहरीले उपत्यकाका नागरिकलाई यस्तो आग्रह गरेको छ।
२. रातको समयमा आफ्नो घर, टोलमा हो–हल्ला गरी हिँड्ने तथा शंकास्पद व्यक्तिहरूको गतिविधि देखमा तुरुन्त प्रहरीलाई खबर गर्नुहोस्।
९ं अपरिचित व्यक्तिले दिएको कुनै पनि खानेकुराको सेवन नगर्नुहोस्। आफ्नो बालबच्चालाई पनि सेवन गर्नु हुन्न भनी सिकाउनुहोस् तथा अपरिचित व्यक्तिलाई झट्ट विश्वास नगर्नुहोस्।
१८. गरगहना लगाउँदा सावधानीपूर्वक लगाउनु होस्। गरगहना लगाएर रातको समयमा हिँडडुल नगर्नुहोस्।
–काठा छाडेर घर जाँदै हुनुहुन्छ भने घरबेटीलाई सबै कुरा प्रष्ट पारेर जानुहोस् र घरबेटीलाई फोन गरेर बेला–बेला कोठको बारेमा जानकारी लिने गर्नुहोस्।
–बहुमुल्य सामान घरमा राखेर नजानुहोस्।
–विश्वासिलो छिमेकी वा नजिकको प्रहरीलाई आफु बाहिर जाने कुरा जानकारी गराउनुहोस्।
–घरको गेट, ढोकाको चुकुल, कब्जा राम्रोसंग बन्द गरी ताल्चा लगाएर मात्र बाहिर जानुहा्स्।
–ग्यास रेगुलेटर, बत्ती जस्ता संवेदनशील वस्तुहरु ‘अफ’ गरेर मात्रै घर जानुहोस्।
–आफ्नो घर, टोल, छिमेकमा बत्तीको व्यवस्था मिलाएर रातभर टोल तथा सडकका बत्ती बाल्ने गर्नुहोस्। सम्भव भएसम्म आपत्कालीन साईरन राख्नुहोस्।
बलात्कार र यौनजन्य अपराधविरुद्ध सप्तरीमा ‘जवाफदेहिता अभियान’ सुरू
बुद्ध भारतमा जन्मिएको प्रचार गर्ने यी कस्ता नेपाली सांसद, के हुन्छ यिनलाई कारवाही ?
प्रहरी इन्काउण्टरमा गुण्डा नाइके मनोज पुन र सोम आले मारिए
श्रीमानले मट्टीतेल खन्याएर जलाएकी युवतीको मृत्यु
बाँकेमा नाबालिका सहित तीन नेपाली चेलीको उद्धार…
कपिलबस्तुका भित्री सडक हिलाम्मे